SONSAF | Qaab dhismeedka ururka
Halkaan ayaad timid: Home » SONSAF » Annaga » Qaab dhismeedka ururka
SONSAF waxay leedahay qaab-dhismeed rasmi ah oo saxan kaasoo Jilayaasha aan dowliga ahayn ay si sidii hore ka wannaagsan ugala qeyb qaadan karaan dadka go’aamada soo saara ee hay’adaha dowliga ah iyo beesha caalamka sidii la isaga kaashan lahaa dhimidda faqriga, dhisidda dimoqraadiyada iyo nabada.
Golaha guud wuxuu ka kooban yahay xubnaha shabakad kasta oo ka tirasn Jilayaasha aan dowliga ahayn ee marka magaceeda la soo gaabsho loo yaqaanno NSA. Golaha Guud Wuxuu qaataa dhammaan go’aanada la xidhiidha siyaasada SONSAF wuxuuna golahani la tacaamulaa arimaha adag. Wuxuu sidoo kale soo doortaa Guddiga Agaasinka.
Guddiga Agaasinku waa laanta sharci dajinta ee SONSAF. Xubnaha guddigan waxaa soo doorta xubnaha Golaha guud. Guddiga Agaasinku wuxuu sameeyaa kormeerka maaliyadeed iyo waxqabad ee dalada. Wuxuu sidoo kale go’aamiyaa hadafka iyo qorshaha SONSAF isla markaana wuxuu sidoo kale hubiyaa qorshaha fagaaraha oo wax ku ool ah.
Guddiga Guddiyada waxaa loo kala qeybiyaa saddex guddi-hoosaadyo kuwaasoo ka masuul ah:
Maaliyada iyo Xisaab-xidhka
Maamulka iyo Isku-xidhka.
U doodida, dakhli uruurinta iyo qorsheynta.
Xog-hayntu waa laanta fulinta ee SONSAF. Waxay ka kooban tahay shaqaalaha maareynta oo ayagu masuul ka ah howlaha maalinlaha ah ee SONSAF. Waxaa madax u ah agaasimaha fulinta kaasoo ay soo doortaan xubnaha Guddiga Guddiyada.